Consultation Meetings | Community Driven Development Project
Annual report (April 2015 - March 2016)	Download INTEGRATED SAFEGUARDS DATA SHEET (English Version)	Download Environmental and Social Management Framework (English Version)	Technical, Cost Effectiveness and Sustainability Audit March 2016	Consultation Meetings	Rescheduling of the Townships Selection Consultation Meeting in Shan State9th June, 2017 | Shan Taunggyi Township, City Hall
Townships Selection Consultation Meeting in Shan State of the National Community Driven Development Project (NCDDP) has been rescheduled on 9th June 2017 from 7th June. Our sincerest apologies for any inconvenience caused. The organization which has already informed us to participate does not need to RSVP again. However, if you have RSVPed, you are no longer able to attend, kindly let us know. ...	Read More »
INVITATION FOR TOWNSHIP SELECTION CONSULTATION MEETING – (Shan State-Taunggyi)
It is my pleasure to inform you that the Government of Myanmar is organizing township selection consultation meetings in Ayeyarwady Region,Saging Region ,Kayin State and Shan State to assist in identifying the townships that will benefit from the National Community Driven Development Project (LuduBahopyu Project). During May, there were three township selection consultation meetings which have been successfully held in ...	Read More »
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်ရွေးချယ်ရေးအကြံဥာဏ်ရယူခြင်း အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပ
(၉-၅-၂၀၁၇) စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြို့နယ်ရွေးချယ်ရေးအကြံဥာဏ်ရယူခြင်း အစည်းအဝေးကို (၉-၅-၂၀၁၇)ရက်နေ့ နံနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့၊မြစန္ဒာခန်းမ၌ ကျင်းပရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ကိုယ်စား တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြည် ကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန မွေးရေ/ကျေးလက် အမြဲတမ်းအတွင်းဝင် ဒေါက်တာခင်ဇော်မှ မိတ်ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှခိုင်မှ စီမံကိန်အကြောင်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်း၊ မြို့နယ်ရွေးချယ်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အခြေခံ အကြောင်းအရာများအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ တက်ရောက်လာသော ကိုယ်စားလှယ်များက သိရှိလိုသည်များအားမေးမြန်းရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ညိုညိုဝင်းနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှခိုင်မှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသောကိုယ်စားလှယ်များအား အဖွဲ့(၁၀)ဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ချင်းဆီမှမိမိတို့ရွေးချယ်ထားသော ရလဒ်များကိုတင်ပြခြင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှခိုင်မှ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းနှင့် လူထုပြုစီမံကိန်း ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မည့်မြို့နယ်များမှာ ကျွန်းလှမြို့နယ်နှင့် ကနီမြို့နယ်များဖြစ်ကြောင်း ...	Read More »
INVITATION FOR CONSULTATION MEETING (Ayeyarwady) စီမံကိန်းမြို့နယ်များရွေးချယ်ရန်အတွက် အကြံဥာဏ်ရယူခြင်းအစည်းအဝေးပွဲ ဖိတ်ကြားစာ
လူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေး အမျိုးသား ပဥမနှစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် စီမံကိန်းမြို့နယ် နစ်မြို့နယ်စီနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တွင် စီမံကိန်းမြို့နယ် သုံးမြို့နယ် ရွေးချယ်ရန်အတွက် အကြံဥာဏ်ရယူခြင်း အစည်းအဝေးများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၏ မြို့တော်များတွင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအစည်းအဝေးများသို့ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှူအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများအား ဖိတ်ကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွက် မြို့နယ်ရွေးချယ်ခြယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မေလနှင့် ဇွန်လအတွင်းတွင် ဘားအံ၊ မုံရွာနှင့်် တောင်ကြီးမြို့တို့၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို မြန်မာဘာသာ တစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်ပေးမည့် အစည်အစဉ် ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ။ အစိုးရမဟုတ်သော ...	Read More »
INVITATION FOR CONSULTATION MEETING – (Sagaing) စီမံကိန်းမြို့နယ်များရွေးချယ်ရန်အတွက် အကြံဥာဏ်ရယူခြင်းအစည်းအဝေးပွဲ ဖိတ်ကြားစာ
Dear Colleagues; It is my pleasure to inform you that the Government of Myanmar is organizing township selection consultation meetings in Ayeyarwady Region,Saging Region ,Kayin State and Shan State to assist in identifying the townships that will benefit from the National Community Driven Development Project (LuduBahopyu Project). We are inviting Non-Governmental Organizations, Civil Society Groups, Community Based Organizations and Development ...	Read More »
Consultation Meeting on Township Selection for CDD project in Kachin State
For the Second Year of Community Driven Development Project which is being managed and implemented by the Department of Rural Development, the Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development with supports from World Bank, meeting for “Consultation on township selection in Kachin State which will get benefit from the project” was celebrated at City Hall, Myitkyina on 14 May, 2015. ...	Read More »
Invitation Letter for Township Selection Meeting of Kachin State
Dear Colleagues: It is my pleasure to inform you that the Government of Myanmar is organizing township selection consultation meetings in Mandalay Region, Bago Region, Mon State, Kayah State, Kachin State and Kayin State to assist in identifying the townships that will benefit from the National Community Driven Development Project (Ludu Bahopyu Project). We are inviting Non-Governmental Organizations, Civil Society ...	Read More »
Public Consultation Meetings For Environmental and Social Management Framework (ESMF)
The Department of Rural Development (DRD), jointly with the World Bank Group was held Public Consultations around the draft Environmental and Social Management Framework (ESMF) for the additional financing of the Myanmar National Community Driven Development (NCDD) Project at Inya Lake Hotel, Yangon on9February 2015 and at Swan Hotel, Mandalay on 11 February 2105. Responsible officers from Department ...	Read More »
Consultation Meeting On Township Selection For CDD Project In Mon State
Consultation meeting on Township selection for third year CDD Project in Mon State was held at the State Hall of Mawlamyien on 17 Dec 2014. The project is implemented by the Department of Rural Development under the Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development and funded by the World Bank. U Ohn Myint (Chief Minister of Mon State), U Myint ...	Read More »